एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालमा आँखा झिम्काएकै कारण भाईरल बनेकी मलयालम नायिका प्रिया प्रकाश वारियर फेरी अर्को भिडियोमा आँखा झिम्काएकै कारण भाइरल बनेकी छन्। एउटा मलयालम फिल्मको गीतमा करिव २५ सेकेण्डको भिडियोमा देखिएकी प्रिया आँखा झिम्काएरकै भरमा रातारात स्टार बनेकी थिइन्।
अहिले फेरी उनै प्रियाले अर्को एउटा भिडियोमा पनि आँखा झिम्काउदै पुन भाईरल बनेकी छन् । यो भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल भैरहेको छ । प्रियाले एक चकलेट ब्रान्डको बिज्ञापनमा अभिनय गर्दै आफ्नो पुरानो अन्दाज देल्खाएकी छन्।
प्रियाले मलयालम फिल्म ‘ओरू अदार लव’ से फिल्मी दुनियाँमा डेब्यू गर्दै छन् । मात्र १८ वर्षकी प्रिया केरलाको त्रिशूर निवासी हुन्। उनले बी कम गर्दै छन्। डेब्यू फिल्म रिलिज नहुँदै फिल्मको एउटा गीतबाटै सुपरहिट बनेकी प्रियाको इंस्टाग्राममा करीब 5.4 मिलियन फलोअर्स रहेका छन् ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५१६:५५
शाहिद कपूर र सैफ अली खान भन्दा पनि यी व्यक्ति भने पछि मरिहत्ते गर्थिन् करीना कपूर !
यी १० बलिउड नायिकाले बाबु-छोरा दुवैसंग काम गर्न भ्याए ! केहिले त दुवैसँग रोमान्स पनि गरेका थिए !
बलिउडका यी ४ स्टार्स जसले पत्नीको हातबाट नराम्ररी सरेआम खाए थप्पड
अजय र माधुरीको ‘टोटल धमाल’ ले गर्यो आक्रामक व्यापार, यस्तो छ अहिलेसम्मको कमाइ!
आफूभन्दा १५ बर्ष सानो प्रेमीसँग रोमान्टिक मुडमा देखिइन् यी अभिनेत्री, हेर्नुहोस तस्विर र भिडियो